Kabtanka Man United ee Antonio Valencia oo sagootin loo sameyn doono… (Maxayse ahayd farriintii uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka) – Gool FM
Kabtanka Man United ee Antonio Valencia oo sagootin loo sameyn doono… (Maxayse ahayd farriintii uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka)
Haaruun April 21, 2019
(Manchester) 21 Abriil 2019. Waxaa la soo sheegayaa in Antonio Valencia loo sameyn doono sagootin xoog leh maadaama uu ka tago kooxda Manchester United.
Kabtanka Manchester United ee Antonio Valencia ayaa la soo warinayaa inuu ka tagi doono kooxda dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Valencia heshiiskiisa garoonka Old Traffrod ayaa ku eg xagaagan, macallin Ole Gunnar Solskjaer inuusan ku jirin qorshihiisa xiddiga mudada dheer difaaca uga ciyaarayey naadiga.
33-sano jirkaan Valencia ayaa dhaawac la dhibtoonayey inta badan xilli ciyaareedkan, waxaana la sheegayaa inuuba xitaa ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey kooxda.
Yeelkeede, waxaa uu bartiisa Instagram-ka soo dhigay farriin u muuqatay sagootin oo uu ugu mahadcelinayo kooxda Manchester United ama xitaa loo fasiran karo inuu kooxda kaga dalbanayo in macsalaameyn loo sameeyo.
Illaa iyo hadda lama sheegin kooxda uu ku biiri doono Antonio Valencia, laakiin waxaa loo badinayaa inuu ka tagi doono kooxda ku ciyaarta Masraxa riyada.
Valencia ayaa Man United kus oo biiray sanadkii 2009-kii, waxaana uu kooxdan tartammada oo dhan u saftay 350 kulan, isagoo kula guuleystay sagaal koob oo ay ku jiraan labo horyaalka Premier League intii lagu guda jiray waqtigiisa naadiga.
Manchester United iyo Manchester City oo ku dagaalamaya saxiixa Weeraryahan ka tirsan kooxda Ajax
Shaxda rasmiga ah kulanka adag ee horyaalka Premier League galabta kooxaha Everton iyo Man United oo la shaaciyey